Sunday 17th of October 2021 / 06:38:49 AM
तिन महिना कुरेर रेणु दाहालले मारीन बाजी
अनलाइन दर्पण 2017-08-05
चितवन, २१ साउन । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह विजयी भएका छन् । निर्वाचन भएका ५ वटा महानगरमध्ये मेयर र उपमेयर दुबै पदमा महिला निर्वाचित भएको भरतपुर महानगरपालिका मात्रै हो ।
भरतपुर–१९ मा आज मतदान : उम्मेदवार एमाले र माओवादीको, भर कांग्रेसी मतदाताको
अनलाइन दर्पण 2017-08-04
काठमाडौं, २० साउन, । भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा शुक्रबार पुनः निर्वाचन हुँदै छ । गत बैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणअन्तर्गत भएको स्थानीय निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि गणना स्थगित गरिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ नम्बर
अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, भरतपुरका जनताले सच्याउनेछन् : एमाले
अनलाइन दर्पण 2017-07-30
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चितवनको भरतपुर महानगरापलिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले भरतपुर महान
देउवा जंगिदा झस्किए कार्यकर्ता
काठमाडौं, ५ साउन । प्रधानमन्त्री एबं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको प्रदेस नं. २ को भेलामा जंगिएका छन् । देउवा जंगिदै बोले, ‘पार्टीमा छाडातन्त्र मौलायो, अनुशासन समिति बनाएर अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्छु ।&rsq
एमाले संग एक्लै भिड्न नसकेपछि कांग्रेसले मोर्चा बनायोः ओली
उर्लाबारी, १० असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलगायत जतिसुकै पार्टीसँग मोर्चा बनाए पनि एमालेसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार विहानैदेखि मोरङको बेलबारी, शनिश्चरे, मिक्लाजुङ हुँदै उर्ला
शेरबहादुर बने नयाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै समर्थनमा
अनलाइन दर्पण 2017-06-06
काठमाण्डाै, जेष्ठ २३ । पुरानाे प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डकाे प्रस्ताव र समर्थनमा अाज देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएकाे छ । प्रचण्डकाे प्रस्ताव र समर्थनमा नेपाली कांग्रेसकाे सभापती शेरबहादुर देउवा मुलुककाे ४० अाै प्रधान
चम्पादेवी गाँउपालिकामा चुनावी चारप्रसार तिब्र पार्दै एमाले
अनलाइन दर्पण 2017-06-04
अाेखलढुंगा,२१ जेष्ठ। स्थानिय निकायकाे चुनाव नजिकिदै जाँदा नेकपा एमालेले अाेखलढुंगाकाे चम्पादेवी गाँउपालिकामा चुनावी चारप्रसार तिब्र पारेकाे छ । स्राेतका अनुसार चम्पादेवी गाँउपालिकामा नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अहाेरात्र प्रचारप
आज प्रधानमन्त्री निर्वाचन, एमालेकाे संसद अवरोध रहे पनि निर्वाचन हुन सक्छ
अनलाइन दर्पण 2017-06-03
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधनमन्त्रि पुस्प कमल दाहाल प्रचण्डकाे राजिनामा पस्चात दलहरु सहमतिय सरकारकाे लागि जुटे पनि सहमतिय सरकार बन्न नसके पछि व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आजका लागि तय गरेको छ ।
तर, दोस्रो ठूलो
देउवा सरकारमा मन्त्रालय टुंगाे लागे पनि एमालेको संसद अवरोधले सरकार गठनमा धक्का
अनलाइन दर्पण 2017-06-01
काठमाडौं, जेठ १९। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनकाे विषयमा गृहकार्य भइरहेकाे छ ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक ले एक अनलार्इन संग कुरा गरे अनुसार यदी देउवा नेतृत्वमा
संघीय गठवन्धनले दोश्रो चरणको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने
अनलाइन दर्पण 2017-05-26
काठमाडौं,१२ जेठ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सहितको संघीय गठवन्धनले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि सहमति अनुसार नभएको भन्दै दोस्रो चरणको चुनावमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले हालै मात्र राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन
उमेद्धारी फिर्ताकाे लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे पत्र
अनलाइन दर्पण 2017-05-04
भक्तपुर, २१ वैशाख । स्थानिय निर्वाचनकाे खारेजी अभियानमा लागेकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भक्तपुरले अाज जिल्ला भरका सम्पूर्ण नगरपालिकाका उमेद्धारहरुलार्इ उम्मेद्धार फिर्ताकाे लागि अाह्वानसहित पत्राचार गरेकाे छ ।
एमालेद्धारा काठमाडौंका १० वटै नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार सिफारिस को को परे सिफारिसमा हेर्नुहोस ( सूचीसहित)
अनलाइन दर्पण 2017-04-26
काठमाडौं, १३ वैशाख। नेकपा एमालेले काठमाडौका १० वटै नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनका लागी मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारको नाम पार्टीमा सिफारिस गरेको छ । मंगलवार बसेको काठमाडौं एमालेको बैठकले काठमाडौका १० वटै नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरुको स
स्थानिय निर्वाचनका उम्मेद्धारलार्इ नेकपाले कारवाही गर्ने
काठमाण्डाै, १२ बैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे राजधानीमा स्थानिय चुनाव विराेधी सभा शान्तिवाटिकामा सम्पन्न भएकाे छ । सभालार्इ सम्वाेधन गर्दै नेकपाका स्थाई कमिटी सदस्य एबम जनसरकार प्रमुख कम्रेड सन्ताेष ब
हतारमा मधेसी दलहरुको एकताः पार्टीको नाम र झण्डा दुवै बिबादित
अनलाइन दर्पण 2017-04-21
काठमाडौ, ८ वैशाख। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध सात दलमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी बाहेकका पाँच दलले बिहिबार पार्टी एकीकरण गरे र नाम जुराए "राष्ट्रिय जनता पार्टी
उम्मेदवार बन्न श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद !
अनलाइन दर्पण 2017-04-20
विराटनगर, ७ बैशाख ।आगामी बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यको उम्मदेवार बन्नका लागि एक महिलाले आफ्नो श्रीमानसंग सम्बन्ध विच्छेद नै गरेकी छन् । विराटनगर उपमहानगरपालिका ११ कि ३६ वर्षीया रिंकुदेवी परियारले यस्तो नि
एमालेले बैशाख १२ भित्रै उम्मेदवार टुंगो लगाउने
काठमाडौं, २२ चैत । नेकपा (एमाले) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।
एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले गठन गरेको मस्यौदा समितिमा अष्टलक्ष्मी
नयाँ शक्तिबाट निष्काशितहरुले आज आज भक्तपुरमा समान्नातर राष्ट्रिय भेला गर्दै
भक्तपुर, १६ चैत । नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा. बाबुराम भटट्राईले बिदेशीको इशारामा स्थानिय तहको निर्वाचनको विरोध गर्दै मधेशवादी दलहरुको लाइनमा गएर अन्तत स्थानिय तहको निर्वाचनमा संघिय समाजबादी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भएपछि रुष्टहरुल
कागेश्वरीमा एक दर्जन मेयरका उम्मेद्वार, वडाध्यक्षमा लोकप्रियलाई भीडाइदैं
अनलाइन दर्पण 2017-03-26
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको काउन्ट डाउन(दिनगिन्ती) ४८ दिन मात्रै बाकी रहदा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा चुनावी माहौल तात्दै गएको छ । क्षेत्रफल र मतदाता संख्याका हिसाबले ठुलो नगरपालिकाका रुपमा परिचित कामनपामा प्रमुख दल नेकपा
एमालेबाट कसले बाजी मार्ला सुनकोशी गाउँपालिकामा ?
अनलाइन दर्पण 2017-03-21
सिन्धुपाल्चोक। स्थानीय निकायको चुनाव हुने नहुनेमा अन्योलता सगै देशभरी चुनावको माहोल तातेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनावमा होमिइसकेको छ । एमालेका पार्टी कमिटीहरु संभावित उम्मेदवार चयनको लागि भेला र बैठकमा जुटिरहेका छन् । ज
संबिधान संशोधन बिना निर्वाचन गरे देश रक्तपातमा डुब्ने महतोको चेतावनी
भक्तपुर, ८ चैत । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संबिधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरे देश रक्तपातमा डुब्ने चेतावनी दिएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबलद्वारा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महतोले माओवादी,